Nagarik Bazaar - अनलाईन क्लासका लागि कस्तो ल्यापटप उचित ?
अनलाईन क्लासका लागि कस्तो ल्यापटप उचित ?
हालै भएको लकडाउनकाले गर्दा सम्पूर्ण विद्यालयहरू बन्द छन् भने अधिकांस विद्यार्थीहरूको अनलाइन क्लास चलिरहेको छ । अनलाइन क्लासका पढ्नका लागि ल्यापटप नै प्रयोग गर्नु पर्छ भन्ने नभएपनि ल्यापटपबाट अनलाइन क्लास लिन सहज भने बनाउछ ।
तपाईंसँग भइरहेको ल्यापटप नै अनलाइन क्लासका लागि काफी हुनसक्छ !!!
यदि तपाईंसँग अहिले प्रयोग गर्न मिल्ने ल्यापटप छ भने त्यहि ल्यापटप नै अनलाइन क्लासका लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ । सामान्यतया इन्टरनेट चलाउन मिल्ने ल्यापटपमा नै जुम वा अन्य जस्ता साइट / एप्सबाट भिडियो कल गर्न मिल्छ । अनलाइन क्लासका लागि कुनै महँगो र नयाँ ल्यापटप नै खरिद गर्नु पर्छ हुँदैन ।
यदि तपाईंको पुरानो ल्यापटप स्लो छ भने त्यसमा SSD हालेर फास्ट बनाउन सक्नुहुनेछ । एसएसडीले ल्यापटपलाई कसरी फास्ट बनाउछ भन्ने कुराको जानकारी यस लिंकमा दिईएको छ :
कम्प्युटर र ल्यापटप फास्ट बनाउन एसएसडीको प्रयोग
यदि तपाईं आफ्नो बच्चाको लागि नयाँ ल्यापटप खरिद गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने यी कुराहरू ध्यानमा राख्नुहोस् :
अनलाइन क्लासका लागि कुनै प्रकारको तडकभडक भएको ल्यापटप चाहिंदैन । सस्तोमा नेरु ३५ हजार मै पनि अनलाइन क्लास लिन मिल्ने ल्यापटप खरिद गर्न सकिन्छ । यी सस्ता ल्यापटपहरू महँगा ल्यापटपभन्दा स्लो र कम फिचरयुक्त भएपनि अनलाइन क्लासका लागि काफी हुन्छन ।
अनलाइन क्लासका लागि Core i3, Celeron, Pentium, Ryzen3वा पुरानो जेनेरेसनको Core i5 प्रोसेसरहरू काफी हुन्छन । नयाँ जेनेरेसनको प्रोसेसर र पुराना जेनेरेसनको फास्ट प्रोसेसर भएको ल्यापटप नै निकै महँगो पर्न सक्छ । नेरु ३० - ४० हजारको दायरामा आउने ल्यापटपमा Celeron कि Pentium प्रोसेसर हुने गर्दछन् । यी प्रोसेसरहरू Core i3 वा Ryzen3जति फास्ट हुदैनन् । तर यी प्रोसेसर भएका ल्यापटपमा भिडियो हेर्न, नेट चलाउन, अनलाइन क्लास लिन र माइक्रोसफ्ट अफिस चलाउन सजिलैसँग मिल्छ । भिडियो गेम खेल्न, फोटोसपजस्ता प्रोग्रामहरू चलाउन वा थुप्रै प्रोग्रामहरू एकैपटक चलाउनका लागि भने Core i5 वा Ryzen5प्रोसेसर भएको ल्यापटप लिनु राम्रो हुन्छ ।
कम्प्युटरमा कति जीबी र्याम पर्याप्त हुन्छ भन्ने विषयमा हामीले एउटा बृहत लेख नै प्रकाशन गरेका छौँ । उक्त लेख तपाईंले यस लिंकमा गएर पढ्न सक्नुहुनेछ:
कम्प्युटरमा कति जीबी र्याम ( RAM ) पर्याप्त ?
छोटकरीमा भन्दा अनलाइन क्लासमा र १-२ वटा प्रोग्राममा मात्र सिमित हुने हो भने ४ जीबी RAM काफी हुन्छ । धेरै प्रोग्रामहरू एकैपटक प्रयोग गर्नका लागि भने ८ जीबी र्याम आवश्यक पर्न सक्छ । गुगल क्रोम जस्तो इन्टरनेट ब्राउजरले पनि धेरै र्याम प्रयोग गर्ने भएकाले २ जीबी र्याम भएको ल्यापटप खरिद नगर्नु उचित हुन्छ ।
कति जीबीको हार्ड डिस्क भएको ल्यापटप किन्ने ? यो प्रश्न आजभोलि पहिले जस्तो सान्दर्भिक छैन । सबैभन्दा पहिले त हार्डडिस्क भएको ल्यापटप नकिन्नु नै उचित हुन्छ । हार्डडिस्कभन्दा एक - दुई हजार महँगो भएपनि एसएसडीको प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ । एसएसडी हार्ड डिस्कभन्दा १० गुणासम्म फास्ट हुन्छन् । त्यसैले नै नयाँ ल्यापटप खरिद गर्दा २५० जीबी कै भएपनि एसएसडी भएको ल्यापटप खरिद गर्नुहोस् । धेरै स्टोरेज आवश्यक परेको खण्डमा बाहिरबाट जोड्न मिल्ने हार्ड डिस्क पनि खरिद गर्न सक्नुहुनेछ ।
पुराना हार्डडिस्क भएका ल्यापटपलाई फास्ट बनाउनका लागि पनि एसएसडी कै प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ ।
५. क्रोमबुक लिने कि?
अनलाइन क्लासका लागि सबैभन्दा उचित सायद क्रोमबुक नै हुन्छन् । यिनीहरू सस्ता हुन्छन, फास्ट हुन्छन, भाइरस लाग्दैनन्, ह्यांग हुदैनन् र ब्याट्री धेरै टिक्छ । तर यी ल्यापटपहरूमा विन्डोज चल्दैन । यिनीहरूमा गुगलको डेस्कटप अपरेटिंग सिस्टम क्रोम ओएस चल्ने गर्छन । क्रोस ओएसमा अधिकांस काम क्रोम ब्राउजरबाट नै हुन्छ । यिनीहरूमा एन्ड्रोइड एप्सहरू इन्स्टल गर्न मिल्छ । विन्डोज नचल्ने भएपछि माइक्रोसफ्ट अफिस, फोटोसप र अन्य जस्ता प्रोग्रामहरू पनि यसमा चल्दैनन् ।
बजारमा धेरै वर्ष अगाडी आएका थिए क्रोमबुक । तर विन्डोजको ल्यापटपलाई कहिल्यै जित्न सकेन र बजार हिस्सा पनि निकै थोरैमा सिमित भयो । नेपाली बजारमा क्रोमबुकको प्रयोगकर्ता निकै न्यून रहेकाछन् भने बजारमा पनि खरिदका लागि विन्डोज ल्यापटप जतिको उपलब्ध छैनन् ।
बजारमा उपलब्ध केही मोडलहरू:
Processor : Intel Celeron / Core i3 / Core i5 / AMD A4
RAM :4GB - 8 GB
Storage : 1 TB HDD / 256 GB SSD
Price: 35,000 to 60,000
2. Asus Vivobook X407MA
Storage : 1 TB SSD / 256 GB SSD
3. HP 15-RB009NIA
Processor : AMD A4 Dual Core
Processor : Core i3 8th Gen
Processor : Core i3 10th Gen
6. Dell Inspiron 14 3493
Processor : Intel Core i5 10th Gen
*मूल्य दराज र हाम्रोबजारबाट साभारित !